अशोक लेलैण्ड र मितेरी डेभलपमेन्टबीच सम्झौता, सिफारिस पाएका ग्राहकलाई ७० प्रतिशतको अफर - नेपालबहस
गृहपृष्ठ अर्थ/व्यापार अटोमोबाइल
अशोक लेलैण्ड र मितेरी डेभलपमेन्टबीच सम्झौता, सिफारिस पाएका ग्राहकलाई ७० प्रतिशतको अफर
८ भदौ, काठमाडौं । आईएमई ग्रुप अन्तर्गत संचालित आइएमई मोटर्स प्रा.लि. द्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेलैण्ड र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (धरान प्रधान कार्यालय रहेको) बीच सम्झौता एवं ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसी प्रसाद वोस्ती र आईएमई मोटर्सको तर्फबाट भाइस प्रेसिडेन्ट इमरान ए. खानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस सम्झौता अनुरुप आईएमई मोटर्सबाट सिफारिस पाएका ग्राहकहरुले सहज रुपमा ७०% सम्मको कर्जा सुविधा मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (धरान प्रधान कार्यालय रहेको) बाट पाउने भएका छन् । यसै अनुरुप ग्राहकहरुले अशोक लेलैण्डको विभिन्न प्रकारका सवारी साधनहरुमा कर्जा सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् । यो सुविधाले आगामी दिनमा ग्राहकहरुलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न निकै सजिलो हुने दुबै कम्पनीका प्रमुखहरुले बताएका छन् । कर्जा सुविधा मात्र नभई दुवै कम्पनीबिच संयुक्त रुममा सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्ने कुरामा पनि सहमति भएको छ ।
अघिल्लो लेखचाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकमा समस्या बढ्दै, समाधान कहिले ?
अर्को लेखभेन्यु टेष्ट ड्राइभ गर्ने ग्राहकलाई पुरस्कार !
आईएमई अटोमोटिभ्सको हार्ले डेभिडसन बाइक फेस्ट